Our congregation was founded in Spain, in 1857 by St. Maria Rosa Molas,apassionate woman for God and humanity. She began in Tortosa (Cataluna), and her spirit and charism of consolation is continuously being spread in4continents, within 21 countries throughout the world; Spain, Italy, Portugal, Slovakia, Venezuela, Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico, Bolivia, Peru, Burkina, Faso, Togo, Mozambique, Ivory Coast, South Korea, Philippines, Myanmar, Vietnam and Indonesia.
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဂိုဏ်းကို ၁၈၅၇ ခုနှစ်စပိန်နိုင်ငံ (SPAIN) တွင်ရဟန္တာ မာရီးယာ ရိုးဇာမိုလာ(စ်) (Maria Rosa Molas) တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ဘုရားသခင်အား အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသည့်အပြင် နှိမ့်ချခြင်းနှင့်လည်း ပြည့်စုံသူ ဖြစ်သည်။ သူမသည် ၀ိညာဉ်ရေးရာနှင့် နှစ်သ်ိမ့်အားပေးခြင်းကျင့်စဉ်ကို Tortosa (Cataluna) မြို့၌စတင်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍သူမ၏လုပ်ငန်းစဉ်များသည် တိုက်ကြီးလေးတိုက်အတွင်းရှိ နိုင်ငံ (၂၁) ခုသို့ ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါနိုင်ငံတို့မှာ စပိန်၊ အီတလီ၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဆလိုဘတ်ကီးယား၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ချီလီ၊ အီကွေဒေါ၊ မက်ဆီကို၊ ဘိုလ်လီးဗီးယား၊ ပီရူး၊ ဘာကီ နာဖာဆို၊တိုကို၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ အိုင်ဗေရီကော (စ်)၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။
Motto : Console, Console my people. (Is 40.1)
Charism: to be an instrument of mercy and consolation
“Praise be God, the Father of our lord Jesus Christ, the father of mercies, and the God of all consolation! He comforts us in all our afflictions and thus enables us to comfort those who are in trouble, with the same consolation we have received from him.”2Cor 1, 3-4
“Console, Console my people” (Is 40:1)
Ø Is to discover man in his limitations and dignity.
Ø To beacry of hope for all who suffer, for all those who wait.
Ø To bring comfort whatever their age, social condition, diseases or poverty.
ကျင့်စဉ်နှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာ Charism & Spirituality
သည်ငါတို့ဒုက္ခဆင်းရဲခံရချိန်တိုင်း၌ငါတို့ကိုအားပေးနှစ်သိမ့်တော်မူ၏ဤသို့ဖြင့်ငါတို့သည် ငါတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်ထံမှရရှိခဲ့ကြသောနှစ်သိမ့်မှုဖြင့်အတိဒုက္ခရောက်နေကြသောသူတို့အားနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်၏။” (ဒုကော်ရိန့်သု ၁း၃-၄)
“သင်တို့၏ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ငါ၏လူမျိုးတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေကြလော့၊ နှစ်သ်ိမ့်စေကြလော့။” (ဟေရှာယ ၄၀း၁)
ငါ၏လူမျိုးတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေကြလော့၊ နှစ်သ်ိမ့်စေကြလော့။” (ဟေရှာယ ၄၀း၁)
ကျင့်စဉ် (charism) ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်နှင့်နှစ်သိမ့်မှူ့ကိုပေးနိုင်သောအသုံးတော်ခံများဖြစ်ရန်။
Ø လူသား၏အကျင့်သိက္ခာနှင့် ၎င်း၏မပြည့်စုံသောအတိုင်းအတာ ရှာဖွေမှုတစ်ရပ်၊
Ø ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသူများနှင့် မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့နေသူများအတွက်အသံတစ်ခု၊
Ø အသက်အရွယ်မရွေး၊ လူမှုအခြေအနေမရွေး၊ ရောဂါ၊ဝေဒနာခံစားနေရသူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက် နှစ်သ်ိမ့်မှုယူဆောင်လာရန်တို့ဖြစ်သည်။
No. 763 Magarlulin Street,
10 miles Saw Bwar GyiGone,